काठमाडौँ । नेकपा (मसाल)ले मूल बाटो डटकम अनलाइनमा प्रकाशित रामसिंह श्रीसको लेख प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ ।
नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले २०७५ वैशाख १९ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस सम्बन्धमा भन्नुभएको छ– “का. रामसिंह श्रीसको मूलबाटो डट कम अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेखप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यान आकर्षित भएको छ ।
जितगढी किल्ला बचाउन रक्तिमको सडक नाटकऐतिहासिक जितगढी किल्ला मणि मुकुन्द पार्क फूलवारीमा भारतीय सरकारको दबाबमा भू.पू. सैनिक पेन्सन क्याम्पको नाममा भारतीय सैनिक क्याम्प बनाउन नेपाल सरकारले जग्गा प्रदान गरेको विरोधमा यस क्षेत्रमा चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदै आइएको छ । यसै क्रममा ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानले बुटवलमा एक हप्तासम्म सडक नाटक “जितगढीको आह्वान” प्रदर्शन गरेको छ । बाँकी...»
आगलागी पीडितलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोगखलङ्गा । जापान नेपाली एकता समाजले प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका मोतिपुर खाडी ओढारका आगलागी पीडितहरूलाई नगद सहयोग प्रदान गरेको छ । जापान नेपाली एकता समाजले पठाएको उक्त सहयोग एक समारोहका बीच राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता एवं सांसद दुर्गा पौडेलले पीडितजनहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । बाँकी...»
विराटनगर । आफैले गोली हान्न लगाएको आरोपमा पक्राउ परेका हिन्दू धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइने भएको छ । आचार्य सोमबार पक्राउ परेका थिए । तर के मुद्दा लगाउने भन्ने तय भएको थिएन ।